Ndị otu anyị - AfricaArXiv
Ndị otu otu AfricanArXiv bụ ndị ọkachamara nwere ezigbo nzụlite na nka dị iche iche na mpaghara dị iche iche metụtara agụmakwụkwọ kachasị elu na nyocha na Africa.
Ọ ga - amasị gị isonyere ndị otu AfricanArXiv? Kpọtụrụ anyị ma mee ka anyị mara otu ị nwere ike isi nye aka.
Maka ajụjụ ndị metụtara izugbe, biko zite ozi ịntanetị ozi@africarxiv.org.
Mahadum nka na Kenya [ORCiD]
Injinia ngwanrọ na onye nyocha na teknụzụ na-esote gụnyere agwakọta mebere na eziokwu dị oke egwu, nyiwe blockchain, yana ikike ikuku dị ala.
Mahadum nke Ibadan, Nigeria, [ORCiD]
Mahadum nke Khartoum, Sudan [ORCiD]
Nwa akwukwo nke ogwu, onye nyocha, onye ochita ahia na onye n’emepe emepe emepe na nyocha, data, na mmuta. Enwere m mmasị n'iwu ọdịbendị na-emeghe emeghe na Africa na nkwenye siri ike na ụdị dịgasị iche na nnabata. Onye hiwere Open Sudan, ihe nlere anya nke imeghe obodo. Ọ nọkwa na kọmitii Executive of SPARC Africa, onye ndụmọdụ maka Mepee Ihe Ọmụma na n’abrabɔ gyinaa mu IHECE11.
Jenetik na Regenerative Medicine Research Center (GRMCR) nke Mahadum Putra Malaysia (UPM) na Malaysia Genome Institute (MGI) [ORCiD]
PhD nwa akwụkwọ nke Human Genetics na-arụ ọrụ na isi na ntụgharị nnyocha na-emepe emepe ezubere iche maka ọrịa kansa ọnya mmadụ na-eji elu-throughput usoro usoro.
Mmụta Ọzụzụ nke Digital, Mkpakọrịta nyocha, Stellenbosch University, South Africa [ORCiD]
Jikwaa ngalaba ọrụ Ọbá akwụkwọ Digital na UCT Libraries ma nọgide na-arụ ọrụ dịgasị iche iche dị iche iche na-enweghị isi, gụnyere nkuzi na echiche na nkà mmụta na ọmụmụ ihe dị egwu na ụlọ akwụkwọ ndị isi na Western Cape, na-enye ọzụzụ na vidiyo, ụda na foto, na-ede nyocha, na-egosipụta ihe osise foto ya, ma na-eme ihe dị ka ọkpọ. Niklas nwere MA (FA) na BA (Hons) site na UCT, yana BA na agụmakwụkwọ na Mahadum Cologne.
Onye na-elekọta Clinical Manager, Mahadum Mahadum nke W Universityrzburg
Ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'obi, ọkà mmụta sayensị asụsụ dị iche iche nke nwere 10 + afọ nke ahụmahụ na biology biology, pharmacology and neurosciences. O nweela ọkaibe siri ike na mba ụwa na-ahụ maka usoro nyocha. Na mgbakwunye na ọrụ nyocha ya, Carine na-etinye aka na nkà mmụta sayensị na ikike ikike sayensị na Africa. Ebumnuche a bụ iji kwado ohere mmụta mmụta, inyefe ihe ọmụma na njikọta mba ụwa iji melite ogo mmụta sayensị na nyocha na Africa.
Lọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwurịta Okwu - TCC Africa, Kenya
Ebe mmasị Kevina gụnyere nyocha na mmepe, ọrụ mmadụ, sayensị data na sayensị mepere emepe. Ọ na-ezube ịgafe ma na-enye azịza nke mepụtara uru na ahụmịhe na-atọ ụtọ na oghere ọrụ nwere ike iyi ka ọ na-eme ma na-akarị ike.
Hisham Arafat kwuru
Achọ Ngwa EMEA, Egypt
Dijitalụ Ngbanwe Onye Nduzi / Data Scientist, Research & Development Engineer, Master Principal Solutions Architect na Lean-Agile Program Manager.
Onye nhazi AfricaArXiv, KWURU, Bénin [ORCiD]
Onye nrụpụta WordPress nke nwere ndabere dị na ọnụ ọgụgụ ndị etinyere ya na mmasị dị ukwuu maka nsogbu ịnweta oghere na Africa yana mgbasa nke ihe ọmụma na ụzọ eji arụ ya na kọntinent ahụ.
Vlọ ọrụ Mohamed V & Hassan II Institute of Agronomy and Medicine Veterinary, Rabat, Morocco [ORCiD]
Nwa akwukwo PhD na Neuroscience
Uniklinik RWTH Aachen, Germany & Egypt
Nlele nke ihe omumu banyere ihe banyere ihe banyere ndu ihe banyere ihe eji eme ihe banyere ogwu ihe banyere ndu ha. Ugbu a na-arụ ọrụ na ịghọta ọrịa na-ejikọta data nje na nje na-arịa ọrịa. Na mbụ arụ ọrụ na Biotechnology na Clinical Research ọrụ.
Onye isi na Ndị ntorobịa Jabulani maka Mgbanwe (JAY4T), Kenya
Onye na-ekwu maka ihe banyere ndu mmadu na ihe mmuta nke sayensi nwere mmasi maka nche-kwa banyere ihe ndi mmadu.
Ngalaba-onye nchoputa na CTO na Vilsquare.org, Naigeria
Onye njikwa ọrụ na onye nyocha na ngalaba dịka ahụike, agụmakwụkwọ, iwu, iwu, ọrụ aka, nrụpụta na nchekwa na nyocha.
Mmemme Mgbochi Ọrịa Cancer Mba - Nigeria, Mahadum nke Ibadan - Nigeria [ORCiD]
Olabode bụ nwa agbọghọ nwere obi ụtọ na Naijiria nwere mmasị pụrụ iche n'ịhụ Africa nke nrọ anyị. O kwenyere na "ahụike bụ akụnụba". Iji bie ndụ nke ọma, ị ga-adị mma. O nwere akara mmụta MSc na BSc na Biochemistry (Cancer Research and Molecular Biology).
Ọ na-ele anya maka ohere iji jikọtara m mmekorita, nyocha, nduzi na nka nka.
Mahadum Alexandria, Egypt
Biochemist na-agbaso akara mmụta MSc na Neuroscience na Biotechnology na usoro ntanetị na usoro ihe ọmụmụ na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ.
Dọkịta Sara El-Gebali
OpenCider guzobere, Germany [ORCiD]
Sara bu onye guzobere OpenCider na onye ndu ndi otu ndi otu data nyocha na Berlin. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka nchekwa data sayensị na European Molecular Biology Laboratories (EMBL) -EBI na EMBO nwere PhD na nyocha kansa site na Mahadum Bern, Switzerland. Ọ bụ onye nkwado siri ike maka iwu obodo na ịkwalite ụmụ nwanyị na ndị na-akọwaghị akwụkwọ na mpaghara STEM.
Mahadum West Virginia, USA [ORCiD]
Nwa akwụkwọ PhD nke nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ọrụ dịka onye sayensị. Nchọpụta ya lekwasịrị anya na akụnụba akụ na ụba, nkwado, akụ na ụba mbara igwe, na eserese.
Jo Havemann kwuru
Onye nhazi AfricaArXiv, Accessnweta 2 Echiche',, KWURU, Germany na Kenya [ORCiD]
Onye na-enye ọzụzụ na onye ndụmọdụ na Science Science Communication na Science Project Management. Na-elekwasị anya na ngwa ọrụ dijitalụ maka sayensị na akara ya ', ọ na-achọ iwusi Research na kọntinent Africa ike site na Open Science.
Onye isi oche, Pivot Mmụta Zuru Globalwa Otu na-ahụ maka nyocha
Nwa akwukwo Postdoctoral na Mahadum Sussex [ORCiD]
Onye isi oche, Ebe Nkuzi na Nkwukọrịta (TCC-Afrịka)
Njiko aka nke ORCID [ORCiD]
Mahadum Washington & Open Access Nigeria
Mahadum nke Oxford (UK), Mahadum nke Witwaterrand (RSA) na KWURU [ORCiD]
N'okpuru Microscope nchoputa